JW Abrabɔ ne Asɛnka Adesua Nhyehyɛe February 29–March 6, 2016
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Dwom 86 ne Mpaebɔ
“Ester Gyinaa Onyankopɔn Nkurɔfo Akyi”: (Simma 10)
[Bɔ Ester nhoma no nnianim nsɛm video no.]
Es 3:5-9—Haman bɔɔ pɔw sɛ ɔbɛsɛe Onyankopɔn nkurɔfo (ia 131 ¶18-19)
Es 4:11–5:2—Ester gyidi nti, na onsuro owu mpo (ia 125 ¶2; 134 ¶24-26)
Es 2:15—Dɛn na Ester yɛe de kyerɛe sɛ ɔbrɛ ne ho ase na otumi di ne ho so? (w06 3/1 9 ¶7)
Es 3:2-4—Ɛbɛyɛ sɛ dɛn nti na Mordekai ammɔ ne mu ase amma Haman? (ia 131 ¶18)
Bible Akenkan: Es 1:1-15 (Simma 4 anaa nea ennu saa)
Nsrahwɛ a Edi Kan: (Simma 2 anaa nea ennu saa) Fa Tie Onyankopɔn nhomawa no ma. Yɛ sankɔhwɛ ho nhyehyɛe.
Sankɔhwɛ: (Simma 4 anaa nea ennu saa) Kyerɛ sɛnea wobɛsan akɔsra obi a ogyee Tie Onyankopɔn nhomawa no; munsusuw kratafa 2-3 ho. Fa asɛm bi gyaw no na da foforo moasusuw ho.
Bible Adesua: (Simma 6 anaa nea ennu saa) Da a edi kan no, womaa obi Tie Onyankopɔn nhomawa no bi. Afei kyerɛ sɛnea wode Tie Onyankopɔn na Tena Ase Daa nhomawa no kratafa 4-5 bɛyɛ Bible adesua. (km 7/12 2-3 ¶4)
Asafo mu ahiade: (Simma 10)
Ɔkwan Bɛn So na Asafo Nhyiam Ho Nhyehyɛe Foforo no ne Adesua Nhoma no Aboa Wo?: (Simma 5) Ɔkasa ne nkɔmmɔbɔ. Ma anuanom nkyerɛ sɛnea adesua a yɛyɛ no nnawɔtwe mfinimfini seesei no aboa wɔn. Hyɛ wɔn nyinaa nkuran ma wonsiesie wɔn ho yiye na wɔanya adesua no so mfaso.
Asafo Bible Adesua: ia ti 10 ¶1-11, ne adaka “Bere Tenten Ahe na Osu Antɔ wɔ Elia Bere So?” (Simma 30)
Dwom 149 ne Mpaebɔ
Kristofo Abrabɔ ne Yɛn Asɛnka Nhyehyɛe, February 29–March 6, 2016